HTMLDOC: HTML ugu beddel PDF-kaaga GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
Qaabka HTML waxaa loo rogi karaa dukumiinti PDF ah haddii aad rabto. Waxaad ku samayn kartaa siyaabo kala duwan. Midkood ayaa ku rakibaya qaybtaada 'GNU / Linux' barnaamijka HTMLDOC. Waa barnaamij leh GUI fudud, in kasta oo aad sidoo kale ka isticmaali karto khadka taliska. Waa iskutallaab iyo ilo furan, waxaad sidoo kale ka arki kartaa faahfaahin dheeraad ah website-ka rasmiga ah. Si aad ugula soo baxdo tarballka lambarka isha aad ururin karto, waad tagi kartaa boggaaga GitHub.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa meelo badan oo ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo yaqaan 'distros', markaa waxaad u isticmaali kartaa maamulaha baakadka rakibid fudud oo ka socota binary. Marka la rakibo, waad bilaabi kartaa isticmaalkeeda. Xusuusnow in aanu ahayn web-ka loo beddelo PDF, laakiin a Dukumiintiyada HTML illaa PDF. Iyo haddii aad rabto inaad sameyso beddelaad, waxay u sahlanaan laheyd sida aad u socoto amarka soo socda:
Haddii aad ka sameyso GUI waa wax fudud oo macquul ah. Waxa kale waa inaad rabto u beddel bogga bogga PDF. Tusaale ahaan, qiyaasi inaad booqatay balooggan oo aad ka heshay qormooyinkiisa. Waxaad dooneysaa inaad ku heysato gudaha PDF si aad ugu daawato offline haddii aadan laheyn isku xirnaan mar walba ama aad si fudud u rabto inaad heysato nuqul haddii laga saaro barta. Taas awgeed waxaa jira qalab kale oo aad u wanaagsan oo khadka tooska ah sidan oo kale ah:
Kaliya nuqul URL-ka maqaalka ama bogga aad jeceshahay, ku dheji sanduuqa oo guji badhanka si aad u abuurto PDF aad ku soo dejisan karto bilaash iyo diiwaangelin la'aan. Xadka kaliya waa tirada dukumiintiyada inaad u rogi karto bil gudaheed ... Qalabkaas ka sokow, waxaa jira xulashooyin kale oo tan lagu sameeyo oo aan faallo ka bixinayo, laakiin kani waa kan aan ugu jeclahay fudeydkiisa iyo waxtarkiisa. In kasta oo ay tahay inaan idhaahdo, in bogagga websaydhada qaarkood aysan u rogi karin, laakiin iyagu waa kuwa laga tirada badan yahay ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » HTMLDOC: u beddel HTML-ka PDF-gaaga GNU / Linux
Ubuntu Touch OTA-10 horay ayaa loo sii daayay
Google Chrome OS 76: wuxuu hagaajiyaa taageerada xisaabaadka badan ee loogu talagalay Chromebooks